भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: तामाङलाई ताज !!!
हुनत अरुले किन प्रशान्तको माया गरे तर मैले भने यो घना तामाङ गाउको सोझो 'आले' अर्थात दाजुभाई सम्झेर पनि उसको पक्षमा उभिए । केहि तामाङ साथीहरुले जितेपछि मिठाई खुवाए, यस्तो लाग्यो कि आफै एक आईडल भएजस्तो।
अनि उसले लाएको नेपाली टोपी र यो रसुवाको तामाङ आलेले लाएको उनिको टोपी मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थाल्यो । दुवैमा निश्चल हासो, नेपालीमन र उही वीर गोर्खालीपनको सादगी ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:16 AM
subash agaman said...
Very good post and caption .Keep it on .I agree with you many Prasant Tamang are flowing their sweat in various rular part of Nepal .Many Shakesphere are ploging in the stony field of Rasuwa and many Anjellina Jolie are as the innocent housewife in Gatlang and Goglung.